Ndị ntụkwasị obi | Li Tim-Oi Foundation
Revd Margaret Sentamu (Onye isi)
Margaret Sentamu bu onye ndu ndoro-ndoro ochichi onye nlere anya na elekwasiri anya di iche-iche. Ọ rụọla ọrụ ọtụtụ afọ na mpaghara nkeonwe, nke ọha na nke atọ nke gụnyere oge dị ka Onye Isi Nhọrọ Ochie, na-elekọta otu ndị na-ahụ maka ịhọpụta ndị ụkọchukwu ọzụzụ maka Chọọchị England. Margaret abụghị onye isi ...
Christina Rees CBE (Onye isi oche)
Christina Rees bụ onye edemede, onye na-agbasa ozi na onye na-ahụ maka nkwukọrịta. Ọ bụkwa onye ozi dị uchu na ụkọchukwu ụlọ akwụkwọ nwa oge. Christina bụ onye otu ọgbakọ nzukọ ndị isi ụka nke Synngland afọ 25, bụrụkwa onye guzobere na Archbishops 'Council, ndị otu na-adụ ọdụ ndị Archbishop nke Canterbury na York n'ihe ...
Tom Travers (Ochekwa Ego)
Tom Travers zụrụ azụ dịka onye na-eme ego, na-arụ ọrụ na mpaghara onwe ya na ọrụ na ụlọ ọrụ tupu ịkwaga na CDC Group. Edere ya na West Papua, Indonesia dị ka onye isi ego nke mmepe ọrụ ọsụ ụzọ, mgbe ahụ ọ rụ ọrụ na ọmụmụ gbasara ikike na nlele na nyocha nke itinye ego na Central Africa na Indonesia. Tom ghọrọ…
Anna Drew Anna Drew bụ onye isi nkwukọrịta maka Diocese nke Canterbury. Onye otu Chartered Institute for Public Relations, ọ rụọla ọrụ na nkwukọrịta ụka ụka ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri na ise, na-ahụ maka njikwa nsogbu, mkpọsa ọtụtụ ụlọ ọrụ na mmepe akụ. Ọ na-ahụ maka nkwukọrịta na nkà mmụta okpukpe, ọ mụọla ma na postgraduate larịị ma ọ…
Tariro Julian Matsveru
A mụrụ Tariro Julian Matsveru na Zimbabwe ma kwaga UK na 2006. O bi na Birmingham Diocese ma bụrụ onye isi ugbu a na Cranmer Hall, akụkụ nke St John's College, Durham, ebe ọ na-eme BA afọ atọ na nkà mmụta okpukpe, Ministry na Ozi. Tupu nke a, ọ gụrụ Biomedical Sciences ma nwee…
Jane B Namurye nwere MA na Peace Peace na International Relations si Mahadum Katọlik nke East Africa yana BA na Community Development na Business Administrator si Daystar University dị na Nairobi, Kenya. Jane bụ onwe ya bụ otu n’ime ụmụ nwanyị nke Li Tim Oi. Jane rụrụ ọrụ dị ka onye nta akụkọ na Servicelọ Ọrụ Redio Sudan ...
Ezigbo Prọfesọ Martyn Percy
Prọfesọ nke a na-akpọ Revd Martyn Percy bụ Dean of Christ Church, Oxford, otu n'ime kọleji kachasị na Mahadum Oxford, yana Dean nke Churchka Katidral nke Dayọsis Oxford. Ọ na-ede ma na-akụzi ihe mmụta nke oge a, yana ịbụ onye otu Ngalaba Nkà Mmụta Okpukpe na Okpukpe na ...
Ndị Revd Norma Rao
Revd Norma Rao mụrụ ma tolite na China. Ọ ghọrọ Onye Kraịst mgbe e nwesịrị mgbanwe Cultural. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji mmụta mmụta okpukpe, a họpụtara ya dị ka diacon na chọọchị dị nso na North East nke China. N’afọ 1990, Norma gụrụ akwụkwọ ma zụọ ya na England ma chiekwa ya na Sheffield…
Revd Dr Stephen Spencer
Revd Dr Stephen Spencer Stephen bụ onye isi ngalaba mmụta mmụta gbasara mmụọ na Officelọ Ọrụ Anglican dị na London, na-arụ ọrụ iji wulite njikọ dị n'etiti kọleji mmụta mmụta na ọmụmụ ihe gafee untù Anglican. Ọ rụburu ọrụ dị ka onye osote onye isi nke St Hild College na Mirfield, West Yorkshire, yana onye isi njikọ nke Diocese ...
Ndị Revd Lucy Thirtle
Revd Lucy Thirtle abụrụla onye e chiri echichi parish na Chọọchị England afọ iri abụọ, na-eje ozi na parish ime obodo na ime obodo na Winchester diocese ruo mgbe ọ gafere na Oxford diocese na 20. Dịka otu n'ime ụmụ nwanyị nke abụọ e chiri echichi, Revd Lucy Thirtle nwere na-enwe ekele mgbe niile maka ndị na-agbachitere na ...
Ndị Revd Erica Wooff
Erica bụ Vicar nke Stockwell Parish na Southwark Diocese ma weta ahụmịhe bara ụba, gụnyere dịka onye isi Diplomat nke Britain, na-eje ozi na China na Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, yana dịka onye njikwa NGO, ọkachamara na mmepe oru ngo. Ọ rụọ ọrụ na njikwa ego yana iwulite mmekọrịta dị n'etiti gọọmentị, ndị isi obodo na ụlọ ọrụ obodo ....